Fayras kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu dunida ku faafo | HADHWADAAG NEWS
Home Video Fayras kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu dunida...
China(HNN):-Seynisyahano u dhashay dalka Shiinaha ayaa ogaaday in waddankaas uu ka jiro xanuun horleh oo lamid ah feyraska corona, kaas oo noqon karo cudur safmar ah sida feyraska hadda dunida ay la daala dhaceyso.
Xanuunkan ayaa dhowaan lagu arkay xayawaanka doofaarka, waxaana sidoo kale ay seynisyahandu sheegeen in uu ku dhici karo ban’iaadamka.
Cilmi-baarayaasha ayaa ka walaacsan in xanuunka uu si sahlan ku faafi karo, dadkana ay is-qaadsiin karaan, lagana yaabo in dunida oo dhan uu ku faafo.
Walow uu cusub yahay haddana waxay dhaqaatiirta seyniska ka digayaan khatarta uu leeyahay, waxayna ku baaqayaan in loo baahan yahay tallaabooyin lagu xadidayo faafidda cudurkan.
Waxay shegeen in shaqaalaha shirkadaha ka shaqeeya hagaajinta hilibka doofaarka looga baahan yahay in ay taxadaraan, xaaladooduna aad loola socdo.
Hargabka shimbiraha ayaa ka mid ah cudurada khatarta ugu badan leh ee ay khubarada caafimmaadka isha ku hayaan xilli dunida ay isku dayeyso xakameynta feyraska corona.
xanuunkii safmarka ahaa ee ugu dambeeyay ee dunida soo mara wuxuu ahaa Swine flu oo adduunka ka dilaacay sannadkii 2009-kii, kaas oo ka bilawday dalka Mexico.
Inkastoo xanuunkaas uusan noqonin sidii loo maleynayay, saameyntiisana ay yareyd – dadka da’da ah waxaa la ogaaday in jirkooda uu iska difaaci karay in kastoo uu la mid ahaa cuduro dunida horay usoo maray.
Xanuunkaas oo loogu magaca daray A/H1N1pdm09, waxyaabaha looga hortagayo waxaa ka mid ah tallaalka sannadlaha ah, kaas oo dadka ka difaaco hargabkaas.
Midka hadda laga soo shegayo dalka Shiinaha waxay isku calaamad yihiin isla kaas la arkay sannadkii 2009-kii, waxaase khubaradu ay shegeen in xoogaa uu ka yara duwan yahay.
Illaa iyo hadda ma jirto khatart muuqata balse barfsoor Kin-Chow Chang iyo khubarada kale ee la shaqeysa, waxay in muddo ah darsayeen xanuunkan, waxaana ay ku baaqayaan in isha lagu hayo.
Feyraas lamid ah corona oo lagu arkay dalka Shiinaha
Feyraska oo seynisyahannada ay ugu magac dareen G4 EA H1N1 wuxuu si dhakhso ah ugu faafi karaa xubnaha jirka iyo neef-mareennada.
Waxay heleen caddeymo muujinaya in xanuunka uu haleelay dad ka shaqeeya kawaanada iyo warshadaha lagu qalo hilibka doofaarka.
Prof Kin-Chow Chang, oo ka hawlgala jaamacadda Nottingham ee dalka Briatin ayaa BBC-da u sheegay: “Hadda waxaan ku mashquulnay fayraska corona, balse yaanan indhaha ka qaadin khatarta ka imaan karta feyraskan cusub.”
Wuxuu intaa raaciyay in inkastoo xanuunkan uusan ahayn khatar hadda taagan, haddana loo baahan yahay in aanan indhaha laga qaadin.
Prof James Wood, madaxa wakaaladda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Cambridge, waxaa uu sidoo kale sheegay in tani ay tahay xasuusin muujineysa in marwalba aan khatar ugu jirna cuduro.
Xoolaha la dhaqdo ee dadka bani’aadamka ay aadka ugu dhaw yihiin waxay sababi karaan xanuuno safmar ah, sida uu sheegay Khabiirkas.
Previous articleMaxkamada Sare ee Dalka Oo Maanta Dhaarisay labadii Xubnood ee Komishanka u Mataleyey Xisbiyada Mucaaridka Jsl.
Next articleHalkan Ka Daawo:Saxafiyiinta Ka Hawl Gala Hargaysa Oo Cambaareeyay Xadhiga Telefeshinada Universal Tv iyo Star Tv.